Ahoana no iray mialoha ny fitondran-tena ny tahan'ny ny cryptocurrency eo amin'ny lafiny ny isan'ny didy napetraka? - Blockchain News
Inona no toetry ny dingana ny fividianana na fivarotana ny cryptocurrency fifanakalozana eo amin'ny an-tserasera?
Aoka isika hoe te-hividy iray Bitcoin for $9,500. Avy eo dia mila nanazava izao faniriana an-tsena sy ny mety ho mpivarotra amin'ny alalan'ny famoahana didy. Mpivarotra hiseho toy izany koa amin'ny alalan'ny fanambarana ny faniriany Bitcoin hivarotra amin'ny vidiny manokana. Raha ny fanirian'ny ny mpivarotra ny fahaiza-manao mifanojo amin'ny ny mpividy, ny raharaham-barotra dia avy hatrany namarana. Ny nahay ny tsy mbola vita baiko dia voarakitra ao amin'ny izay fantatra amin'ny anarana hoe ny baiko boky.
Amin'ny maha-fitsipika, eo amin'ny fifanakalozana, ny mba boky dia aseho ao amin'ny endriky ny latabatra, aiza ny fampiharana ny mpivarotra no voalaza ao amin'ny mena, sy ny mpividy’ fangatahana any maitso. Ny kisary ny latabatra mampiseho ny isan'ny vola madinika sy ny zava-dehibe noho izay mikasa ny mivarotra na mividy. A niely dia niforona tamin'ny fihaonan'ny ireo latabatra, na ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ny tolotra sy ny tinady. Ny ambany ny fihanaky, ny ranon-javatra bebe kokoa ny crypto-pananana.
Ao amin'ny tabilao etsy ambony, ny convergence ny fetra hividy sy hivarotra baiko dia aseho amin'ny rindrina izay matetika mampiray. Ny lafiny fifandraisana ny maitso sy mena rindrina no Marary efa ho ny amin'izao fotoana izao ny tahan'ny cryptocurrency.
Boky mirakitra ny baiko baiko ihany no fetra, toy ny tsena didy (nanao vidiny eny an-tsena) dia tonga saina avy hatrany, ary tsy misy dikany ny hampiseho azy ireo ao amin'ny boky mba.
Ny fandalinana ny boky mba mpitarika dia famantarana ny tsena fepetra, araka ny mamela olona forecast fiovana alohan'ny nitranga. raha, ohatra, hitantsika lehibe fanangonan-karena ny veloma ho amin'ny fampiharana ny vidiny ambony fetra, dia afaka milaza mialoha fa raha vao tonga an-tsena io fetra, dia hisy tezitra ara-toekarena amin'ny alalan'ny maro be ny varotra.
Mitovy baiko ho an'ny mpilalao lehibe Dia samy zava-dehibe ho fanaovana varotra fanapahan-kevitra, toy ny foana izy ireo mba voamarika ao amin'ny boky ary afaka manilika fampifanarahana be ny miaramila. Matetika baiko hita ao amin'ny boky mba izay tena akaiky ny toe-piainana an-tsena. Rehefa mihetsiketsika ao an-tsena lalana iray na ny iray hafa, dia nisintona ny eny anivon'ny tsena, manitsy ireo hetsika. Tamin'ny fotoana, rehefa manatona ny vidiny ny haavon'ny ny fanoherana, matoantenin'ny atao baiko (manaraka mitovy lenta) akaiky ny tsirairay ao amin'ny vidy, ireo dia efa raikitra ao amin'ny boky mba.
Ny tahan'ny ny cryptocurrency
nectary hoy i:
Mey 21, 2018 amin'ny 6:41 PM
emaciated hoy i:
Mey 22, 2018 amin'ny 5:44 PM
Technology hoy i:
Mey 23, 2018 amin'ny 10:45 PM
Seitensprung hoy i:
Mey 25, 2018 amin'ny 8:56 PM
agiso hoy i:
Mey 29, 2018 amin'ny 2:31 AM
선릉야구장 hoy i:
Jona 8, 2018 amin'ny 2:36 PM
solidify hoy i:
Jona 10, 2018 amin'ny 9:09 AM
down hoy i:
Jona 13, 2018 amin'ny 8:25 AM
Harvey hoy i:
Jolay 21, 2018 amin'ny 10:39 AM